Isondlo esifanelekileyo - ubomi obude
Ngethuba lethu, indlela yokuphila enempilo kunye nokukhishwa kwemikhwa emibi, akuyiyo imfihlo kunoma ubani ukuba isondlo esifanelekileyo sisisigxina nje sokulondoloza ulutsha kunye nomtsalane, kodwa nesibhambathiso sokuphila ubomi obude kwaye obonwabileyo. Akukho nto ibiza ngaphezu kwempilo yethu, engathengiweyo kwaye kuthengiswa kwihlabathi elilawulwa yimali. Ngako oko, kuya kuchaneka ukubalisa iingcinga kunye nokubeka uphawu "olulinganayo" phakathi kwabo: ukutya okunomdla kukude ubomi. Ngaba ungathanda ukubona ulutsha olutshanje luye lwawuthatha la mazwi ngokwabo, kuba ubomi obude ngoku buyi-rarity.
Siphila kwihlabathi elinokukhawuleza, xa ungenaso ixesha lokutya ngokuqhelekileyo. Yingakho sineengxaki ezininzi zezempilo, ngokubonakala.
Esinye sezi "mfihlelo" zobuhle kunye nolutsha kukutya okumodareyitha okufanelekileyo, okumele kukwanelise ngokupheleleyo zonke iimfuno zomzimba, kwaye ngexesha elifanayo ligcine isisindo somzimba esisisigxina. Ukuguqulwa kobunzima kwisisindo kunobungozi bobabini ukubonakala kunye nomzimba ngokubanzi. Khumbula ngale nto, kwaye ungalokothi "uthenge" kwiivenkile ezilingayo, ezithatha le nto okanye eso sigqirha, unokukrazula i-kilogram ezili-12 ngeveki. Emva kwakho konke, akunakwenzeka ukuba indawo yenkinga yomzimba wakho ilahlekelwa ngumzimba, okokuqala kukulahlekelwa isisindo ebusweni nasesifuba, kodwa ucinga ukuba kukuhle ekukhangeni kwakho? Akunjalo! Ngoko, musa ukulibala malunga necala eliphambeneyo lokulahlekelwa ubunzima.
Ngoku amaninzi amabhinqa anika ingqalelo kwibala labo, kodwa ngokuqhelekileyo benza okungahambi kakuhle. Ukukhawuleza ukukrazula iikhilogram ezingaphezulu, usebenzise indawo yokutya okungekho sikweni, ukulala nendlala, ukunyamezela umzimba okanye ukuthatha iipilisi ezahlukeneyo kunye namayeza. Ngelishwa, lo mkhwenkwe ongenangqiqo wobuhle udla ngokuhlala kwisibhedlele esibhedlele. Kwaye ke yintoni? Isethi esheshayo yee-kilogram zangaphambili ...
Ukugcina isibalo esincinane sibonakala sihle kwaye siqinisekise ubomi obude, kufuneka uqale ukujongana nawe ebusheni. Kulula ukukhusela ingxaki ethile kunokuba ulwe kamva. Emva koko, njengoko kuyaziwa, ukukhusela izifo kungcono kunonyango.
Okokuqala kufuneka uqikelele ubunzima bakho obukhulu. Oko kukuthi, ubunzima obuhambelana nokusebenza kwakho ngokomzimba jikelele. Kwiqela ngalinye leminyaka, lihluke. Ubunzima bomyinge bomntu buxhomekeke kubude bakhe. Kukho uhlobo olulula kakhulu lokubala: "ukuphakama (cm) - 100 = ubunzima bomzimba (kg)". Umzekelo, ukuba ubude bakho buyi-164 cm, ngoko ubukhulu obuqhelekileyo buya kuba ngu-64 kg. Kubantu abancinci, ukuzama ukulungelelanisa imizila emzimbeni, abafazi, ungasebenzisa le fomyula elandelayo: "ukuphakama - 100 = ubunzima bomzimba, ubunzima bomzimba - ubunzima bomzimba 10% = ubunzima bomzimba obuphezulu". Umzekelo, ngokunyuka kwe-164 cm, isisindo sakho esifanele sibe ngu-57.6 kg.
Ukuba ubudala bakho buphakathi kweminyaka engama-50 ukuya kuma-60, ungazami ukuba ngumntu onobuhle kakhulu: 2-3 kg ye "bunzima obuninzi" yakha umgca weoli, apho kubonakala khona imibimbi kwaye ingabonakali. Ifomula yesisindo esilungileyo sale nqanaba liza kuba: "ukuphakama - 100 = ubunzima bomzimba, ubunzima bomzimba + 5% ubunzima bomzimba = ubunzima bakho obukhulu".
Sidinga ukulinganiswa imihla ngemihla ngexesha elifanayo, ngokukhethekileyo kusasa. Ukuba kuthelekiswa nobukhulu beentsuku ezidlulileyo wongeza i-200 g, uchithe usuku (i-apple, i-watermelon, ubisi, i-kefir, ilayisi, njl.).
Yidla rhoqo, malunga namaxesha angama-4-6 ngosuku, kodwa thabatha inani elincinci lokutya. Ukutya okungekho kwesigqi sokutya okunomdla kunempembelelo emzimbeni. Ubangela ukuziva ulambile, kuholele ekuphuleni komgudu wesisu, isibindi kunye ne-pancreas, ukufumana isisindo somzimba ngokukhawuleza. Emva kwakho konke, umzimba wethu wonke kunye nesisu, ngokukodwa, sebenza njengewashi. Ngoko ke, ngexesha elithile, sivakalelwa kukuba silambile, esiswini seqala ukukhupha ijusi yesisu. Ukuba ukutya akungena emzimbeni, oko, ngenye indlela, kuthintela impilo yethu. Ngenxa yoko, izilonda ezininzi, i-gastritis, ukuzitywa kunye nezinye izifo zesondlo sokutya.
Thatha ukutya ngexesha elithile, ungabi msinya uze ungathethi.
Ukuba unquma ukulahlekelwa isisindo, kungcono ukubona ugqirha. Uya kukunceda ukhethe ukutya okufanelekileyo kuwe, usebenzise unyango kwaye uza kuqesha i-massage.
Izicubu ezinamafutha emzimbeni ziqokelela ngokuthe ngcembe, ngoko kufuneka ulahlekelwe ngokuthe ngcembe. Impumelelo ayiyi kuqinisekiswa ngethuba elifutshane, umgudu onamandla, kodwa ngenjongo kunye namandla, okumele kuhlale ixesha elide.
Kukho ukutya okuninzi, ngokubonga ukuba ungalahlekelwa njani iipilisi ezingaphezulu. Kodwa kufuneka ukhumbule ukuba ukutya akufanele kube yi-calori ephantsi kuphela, kodwa kuzaliswe ngokupheleleyo ukugcinwa ngokubanzi komzimba. Sidinga ukutya imifuno, iziqhamo, iimveliso ze-lactic acid, nokutshintsha amafutha ezilwanyana kunye nemifuno yemifuno.
Imifuno emifuno kunye neziqulatho ziqulethe kuphela iivithamini kunye nezinto ezilandelelanayo, kodwa kunye nefiber yefriji eninzi, eyenza i-excretion yomzimba wee-toxins ibe negalelo kwaye inomphumo onomdla kwimisebenzi yesibindi kunye neentso.
Ukuba ubunzima bakho buqhelekileyo, okanye ukongezwa kukuba, kodwa kungabalulekanga, oku akuthethi ukuba awudingi nayiphi na ukutya. Emva koko, ukutya, okokuqala, kuhlose ukuphucula impilo yakho. Kuya kuba luncedo kakhulu kumzimba wakho 1-2 ngamaxesha ngenyanga ukuchitha usuku lokukhulula. Kunceda ukuhlambulula umzimba kunye nokususa i-toxins kuyo, ukuphucula impilo kunye nokugcina kakuhle. Ukuhlawula okunjalo iintsuku kuphucula kakhulu imeko yezempilo kunye nemizwelo, uya kuba, njengokungathi kulula kwaye ngaphezulu, ulusu luhlanjululwa kwaye luba lucocekile kwaye lubangele.
Umsebenzi oqhubekayo kuwe awukuthi ubuhle kunye nempilo kuphela, okwenza uziqiniseke ngokwakho. Kwaye abantu abanokuzithemba abazange bahlale bodwa, injongo yobomi babo, bahlale bephumelele, nokuba ngumsebenzi okanye ubomi bomntu. Kwaye ke, xa unqobile imfazwe encinane kunye nobunzima obukhulu, unokuba ngumpumelelo ebomini bakho.
IiVithamini ekwandiseni i-hemoglobin kunye ne-immunity
"Iimpawu zobungqina" zempilo nobuhle
Inxuwa: ingozi okanye inzuzo?
I-coat ye-Oatmeal ne-cherries nobusi
Indlela yokulala ngesondo ukuze ukhulelwe
Kuphi ukusebenzela umfazi wama-Orthodox?
Iyintoni ukutya okuluhlaza kwaye kuyincedo okanye kuyingozi kumzimba womntu
Isobho kunye nesobho
Udokotela uAlexey Makarov
Ubomi bomntu siqu uKarina Andolenko: indoda, abantwana ... kunye neekati
Iklabishi kunye anyanisi
Ilayisi kunye neentlanzi zaselwandle ngeJapan
Impembelelo yokuphila ebhebha